Indlela yokuqhuba ucwaningo olunzulu lwegama elingukhiye ku-Amazon?
Ucwaningo lwegama elingukhiye luyingxenye ebalulekile yomkhankaso wokwenza ngcono kwe-Amazon okufanele wenziwe ekuqaleni kwesigaba sakho sokuqalisa umkhiqizo ku-Amazon. Le nqubo ihlanganisa ukucinga yonke imibandela yokucinga evumayo nephezulu ekwazi ukuthuthukisa ukuthengisa kwakho. Kuyaphawuleka ukukhetha wonke amaqembu wegama elifanele ukuthi amakhasimende akho angasebenzisa ukuthola imikhiqizo yakho noma izinto ezihlobene. Kuyisihluthulelo sempumelelo uma ukufaneleka komkhiqizo kumbuzo wosesho lomsebenzisi kuzoqunywa ngokubaluleka kwemigomo yokusesha esekelwe ohlwini - cheap domain hosting hosting hosting internet. Uma ngabe unakekele okungenani igama elilodwa elihlosiwe lokusesha, amathuba akho okuvela emiphumeleni yokusesha yombuzo owodwa womsebenzisi uzokwehlisa. Ukuze ugweme ukulahlekelwa ngaphandle kokuthengisa udinga ukuhlaziya ukuthambekela kwe-Amazon futhi wenze uhlu lwamagama okucinga afanele kakhulu. Kulesi sihloko, sizoxoxa ngezindlela zokwenza ucwaningo ngegama elingukhiye le-Amazon njenge-pro. Zonke lezi zeluleko zisekelwe ekuhlangenwe nakho kwethu. Ngakho-ke, singawabiza ngokuthi awusizo futhi awusizo.
Amathiphu namathuluzi azokusiza ukuba uhlole ucwaningo lwezinga eliphezulu le-Amazon
Ukuhlangenwe nakho komuntu siqu
ama-search ahlobene kakhulu ku-Amazon ukuzibeka ezicathulweni zamakhasimende wakho. Yingakho uqale umkhankaso wakho wokucwaninga ngokucabanga ukuthi yiziphi amagama amakhasimende akho angasebenzisa ukuze uthole izinto zakho. Kufanele ucabangele izici ezinjengezikhathi zokuthenga imikhiqizo yakho, uhlobo luni lwemibuzo abazoyithola, nokuthi hlobo luni lwezinto abangazithenga kunomkhiqizo wakho.
Hlanganisa wonke amagama okucinga azofika engqondweni bese uwahlola ngokusebenzisa iziteshi zokuxhumana nabantu ukuze ubone ukuthi abantu bakhuluma ngani mayelana nomkhiqizo wakho. Kuzokusiza wenze ezinye izilungiso ezidingekayo ohlwini lwakho bese ulugcwalisa. Lapha uzokwazi ukuthola ezinye izilinganiso, ama-acronyms, nesifinyezo esivame ukusetshenziswa emphakathini.
Wake wazibuza ukuthi ungasebenzisa kanjani i-Amazon ngezinjongo zokucwaninga ngegama elingukhiye? Isebenza kahle nje. Udinga nje ukuthepha izinhlamvu ezimbalwa ebhokisini lokusesha nemikhiqizo kuzovela ngokuzenzekelayo njengeziphakamiso. Lo msebenzi ozoqediwe ngeke ukwazi ukukunikeza idatha enembile ephakeme ngoba ibonisa imigomo yokusesha iningi. Noma kunjalo, ungaqiniseka ukuthi uzokwethula ngemigomo yokusesha evumelekile engahlanganiswa nokufakwa kuhlu komkhiqizo wakho.
Udinga ukucacisa futhi ukubekezela usebenzisa lo msebenzi ophelele. Udinga ukulandela igama lomkhiqizo wakho ngezinhlamvu ze-alfabhethi bese uqaphela ukuthi yini efikayo. Kufanele uthole imigomo yokucinga efanele futhi eqinile kakhulu evumelana nezinto ozithengisayo. Ngaphezu kwalokho, izigaba eziphakanyisiwe zingakusiza ukuthola amanye amaqembu ukuze uhlele imikhiqizo yakho.
Ngokusho kwemikhombandlela yokubeka ama-Amazon, imikhiqizo yakho izobonakala kuphela ngalawo magama osesho owafaka ohlwini lwakho naku-backend. Kusho ukuthi akufanele ufake phakathi amagama okucinga okuphezulu wevolumu kuhlu lwakho kodwa futhi lihlobene namagama angukhiye omude omdala azokwenza amathuba akho athole amakhasimende akho angenzeka. Kodwa-ke, kufanele uyenze kuphela esimweni uma unesinye isikhala samagama angukhiye. Isu lakho eliyinhloko kufanele kube ukumboza amagama okucinga achaza umkhiqizo wakho.
Uma ungathanda ukuthola imigomo yokucinga efanele kakhulu ngaphandle kokuchitha isikhathi esiningi nemizamo, ungenza ukuhlaziywa kokuncintisana. Lo mthombo wokuphefumulela igama elingukhiye awukwazi ukunqunywa. Cinga lawa mazwi kumathiphu omkhiqizo womncintiswano, izinhlamvu, nezincazelo. Lapha ungathola amagama angukhiye abalulekile ongawacabanganga ngawo. Qiniseka ukuthi ukusetshenziswa komkhiqizo kufakwe isihloko (f. e. isikhumba samafutha; isikhumba esomile; abesifazane, njll. )
Ngithi ngaso sonke isikhathi amandla alaleli synonymizer awabonakali kufanelekile. Leli thuluzi lingasisebenzisi kuphela izilimi kuphela kodwa nabathengisi be-Amazon. Kuwusizo ngokukhethekile uma kuziwa emikhiqizo okungenzeka ibe negama elilodwa, noma lingasetshenziswa ezimweni ezahlukene. I-Thesaurus ingakunikeza ngezinhlobo zamafomu wegama kanye nezilinganiso ezifanayo.
Ukusebenzisa leli thuluzi lokucwaninga ngegama elingukhiye, kufanele uhlale ukhumbule izici ezilandelayo:
sebenzisa amafomu amaningi kanye namazwi angasodwa;
bheka amagama achaza into oyithengisayo;
ungakhohlwa ukwenza amaphutha okungafani;
azame ukuthola lapho izinhlamvu zamagama ezifanayo.
Wonke amasu okucwaninga ngegama elingakapheli angasebenza uma unomugqa owodwa womkhiqizo futhi eziningi isikhathi esikhululekile. Noma kunjalo, bangakunikeza ngemiphumela efanayo namathuluzi okucwaninga ngegama elingukhiye. Uma unemikhiqizo eningi empendulo yakho futhi ungathanda ukukhulisa ukuthengisa kwakho, isofthiwe ye-Amazon search professional izosebenza kahle kakhulu ebhizinisini lakho.
iGoogle yiyona injini enkulu yokusesha emhlabeni enkulu kunazo zonke ukucwaninga kwemikhiqizo. Kusho ukuthi idatha yokusesha kakhulu ku-Google izofana ne-Amazon. Ukusebenzisa leli thuluzi, ungathola umqondo ukuthi yini amakhasimende akho angase awafunayo futhi athole amagama okucinga okubhekiswe kumkhankaso wakho wokuchofoza nge-Amazon ngokukhokha ngakunye. Leli thuluzi likhululekile ukusebenzisa futhi lingakunika idatha enembile kakhulu kuwebhu. Ukusebenzisa i-GKP, uzokwazi ukuhlola ivolumu yokusesha yamagama wakho okusesho okuhlosiwe kanye nokuhlaziya izikhundla zakho zokubeka ukuncintisana. Kodwa-ke, udinga ukulungela ukuthi idatha ye-GKP ingahluka kangcono ku-Amazon, ngakho kuzodingeka uyilungise.
Ngakho, i-Google Keyword Planner yenza iphutha kodwa ingaba yinselele ukuyisebenzisa. Ngaphezu kwalokho, kudinga i-akhawunti ye-AdWords.
I-SEMRush iyithuluzi lokucwaninga elingukhiye lochwepheshe elizokusiza ukuba uthole umsila omude ukusesha amagama asekelwe ekuhloleni okuningi nabacwaningi. Ngalesi thuluzi, ungabheka izincintisana zakho ubone ukuthi yimaphi amagama okusesha abanikeza ithrafikhi eningi kakhulu. Ingxenye engcono kakhulu yukuthi ingabonisa izikhundla zakho zamagama angukhiye.